"Dumarka reer Cameroon waa deyn aan lagu qiimeynin hay'adaha dawladda - TELES RELAY
ACCUEIL » SIYAASADDA "Qaar ka mid ah qurba-joogta reer Cameroon waa deyn aan lagu qiimeynin hay'adaha dawladda
"Qaar ka mid ah qurba-joogta reer Cameroon waa deyn aan lagu qiimeynin hay'adaha dawladda
Sanado badan, waxaan ka fekeray xaaladda iyo mustaqbalka qurba-joogta reer Cameroon, si ay u noqoto tixraac ku saabsan qorshaha adduunka iyo qaab-dhismeed heer sare ah. Waxaan kula wadaagi doonaa fikradaheyga ku saabsan tan.
DIASPORA, oo ah erey macquul ah, laakiin sidoo kale waxay leedahay khatarta ah inay noqoto mid ku xiran dhamaan waxyaabaha la isku halleyn karo. Ka hor inta aanad sheegin waxa qurba-joogtu naga qaban karto iyo sida ay tahay in waddanku u hubiyo soo dhaweyn wacan, waa in aan marka hore qeexno waxa aan dhigaynay waqtigan.
BULSHADA: QIIMEYNTA QIIMEYNTA.
Dhammaan dadka soo galootiga ah ee mudo dheer ama ka yar aan loo tixgelin karin xubin ka mid ah qurba-joogta. Qurba-joogtu waxay u hoggaansamaan shuruudaha u-qalmitaanka. Labada ugu muhiimsani waa xidhiidh adag oo leh waddanka asal ahaan iyo heer sare.
Xiriir la leh waddanka asal ahaan ka soo jeeda.
Si aad u sharraxdo qaybtan, waxaanu tusaale ahaan noqon doonaa, qurba-joogta intooda badan ayaa lagu soo sheegayaa qaababka ugu habboon. Waxaa jira afar: Yuhuud, Erman, Shiinees iyo Indiyaan.
Yuhuudda. Waxay ku saabsan tahay erayga macnaha macnaha ereyga, waxaa loo isticmaalay markii ugu horeysay. Xidhiidhka ay la leeyihiin waddanku aad ayuu u xoogan yahay, dibna ugu soo noqoshada ayaa lagu qorayaa xasuusta. Xidhiidhkan waxaa sii xoojiyay diin ahaan, waana kalkaalinta qurba-joogta ah ee lagu magacaabo xiriirka dhaqanka.
Ermeniya Waa qurba-joog ku filan sidoo kale. Waxay sidoo kale sii wadeen xiriir weyn oo ay u hayaan waddankoodii asal ahaan diinta islaamka iyo luqadda ay qurba-joogta ku hadlaan.
Shiinaha. Waa dad leh dhaqaaleha dhaqaaluhu waa da 'wayn. Xiriirrada dhaqameedu aad ayay u xoogan yihiin, sida aan arki karno. Dalalka qaar, waxay magaalooyin ku dhajiyeen magaalooyinka - Chinatown - magaalooyinkooda, iyagoo ku shaqeynaya fasaxooda (Sannadka Cusub ee Shiinaha) oo ay sii wadaan luuqadooda.
Hindida. Waa qurba-joog aad u qurux badan. Waxay sidoo kale u guuri doontaa sababo dhaqaale. Xidhiidhka ay wadanku ku yeeshaan waddanku waxa uu abaal-marin ballaaran, dhaqaale ahaan iyo xitaa dibloomaasi, maxaa yeelay waxay saameyn ku yeeshaan go'aannada Qaramada Midoobay ee ku aaddan waddankooda.
Waa sifo aad u xoogan oo ku nool qurba-joogta kuwaas oo noo adeegaya qaab ahaan. Waxaa jira adduunyo abaalmarin badan oo Nobel Prize ah ee adduunka. Ermeniyiintu sidoo kale way jecel yihiin arrintaan. Waxay sameeyaan xawaalad lacag badan oo ah qaabka deeqda ama maalgashiga. Hindida ayaa ah kan ugu weyn saynisyahannada kombuyuutarka ee Silicon Valley Kalfadhiga California iyo kufadhiyada ay ku jiraan shirarka caalamiga ah waa mid miro.
Awoodda ganacsatada Shiinaha ee dibadda ka yimid waa ilaha gaarka ah ee isweydaarsiga sarrifka iyo in ay ku guuleysteen farsamooyin tiknoolajiyad oo aad u sareeya isla markaana waxay u egyihiin Hindida kuwaa oo u keenaya maalgashi ballaaran oo dalalkooda ah, iyaga oo leh lacagkooda ama maalgelin shisheeye.
Marka laga eego aragtida dalalka ka baxaya, dadaal kasta ayaa la sameeyey si loo hubiyo in qurba-joogtaasi ay ku faraxsan yihiin in ay guryahooda ku noqdaan. Waxay og yihiin in la jecel yahay oo la doonayo. Qalabka khaaska ah ayaa loogu talagalay iyaga.
Dhalashada labadaba waa mid nidaamsan, waxaana hadda jira waddamo badan oo wasaaradaha, saraakiisha la soo doortay iyo aasaasihii loo qoondeeyey iyaga.
Taas ka dib, waxaan isweydiin karnaa wixii xaalad ah ee qurba-joogtu si macquul ah uga fekerayaan guul iyo guul ay ku gaari karaan dalka. Waa wax iska cad in aan la hadleyno qurba-joogta "positive" oo aynaan wax badan sheegi doonin.
Waxaa horeba jirey ka qaybqaadasho qurba-joog ah oo ku salaysan daryeelka qoysaska waana ku faraxsanaan karnaa. Waa calaamad aan khiyaanayn. Walaalaheennu waxay isku haystaan ​​xidhiidh adag oo ay la leeyihiin asalka. Guusha Camerooniyaanka dibadeed waa mid si fiican loo dhisay.
Muusikada iyo farshaxanada dhammaan noocyada, cayaartoyda iyo cayaartoyda kale, ayaa ah kuwa ugu fiican dhammaan dadka soo haajiray Afrika. Dugsiyada sare, jaamacadaha, ganacsatada, Camerooniyyadu waxay samaysteen oo isu caddeynayaan naftooda.
Waxaan si buuxda ugu qanacsanahay in badan iyo in ka badan, waxay ka fekerayaan soo laabashada ka qaybgalka horumarinta Cameroon.
Aynu sharaxo iimaankani tusaalaheyga iwm. Ka dib toban sano ka dib dibedda, ka dib waxbarashadayda iyo inkasta oo mowqifka bulshadiisu aanu ahayn mid xun - arrin lid ku ah - waxaan dareemay rabitaan ah inaan ku noqdo gurigeyga. Waan ogaa in Cameroon ay u baahneyd abaabul xooggan oo ku wajahan dhalinyarada ku jirta siyaasadda. Dib-u-soo-celintaan, waxaan ogaaday da'da sanadka 29 ee 2008. Sida aynu wada ognahay waxaan ka fogyahay ka reebitaan.
Dhallinyaro badan iyo waayeel badan ayaa safarkan sameeyay. Kuwa kale waxay ku maalgeliyaan abuurista hanti ama hantida maguurtada ah. Weli dad kale - badankood - waxay dareemayaan dhulka waxayna sugayaan xaaladaha soo-dhowaynta si loo hagaajiyo. Sidaa darted kubada ayaa ku jirta xerada maamulka.
Dhiirigelinta dawladda ee soo noqoshada.
Walaalaheena iyo gabdhaha kale ee ku nool dibedda ayaa ka qoomamaya in qalabka aan ka dhex aragno deriskeena aan lagu dabooli karin waddankeena.
Ma fahamsan yihiin in Cameroon ay ka mid tahay afartii Wadamada Afrika ee leh DRC, Itoobiya, iyo Madagascar, kuwa kaliya ee gebi ahaan ama qayb ahaan ka baxsan jinsiyada labadaba. Kiiska Cameroon waa mid ka mid ah kuwa ugu xakameynaya adduunka.
Waa maxay sababta? Maxaa cadaynaya? Xaaladdani waa mid aad halis u ah xiriirkayaga qurba-joogta ah ee aan dareemeynin in ay yihiin kuwo jecel.
Soo jeedinta aan u sameeyey kooxdayda in PURS ay aqbashay waa mid cad oo kacaan ah. Marka la eego jinsiyada laba-geesoodka ah, booskeena waa mid aan caddayn; Dhalashada Cameroon waa xaq aan loo aamini karin muwaadin kasta oo reer Cameroon ah.
Qaadashada jinsiyad kale uma yeedhin su'aashan sharcigaan. Waxaa loo gudbin karaa carruurta.
Waqtiyadan marka aynu eegno dhaqdhaqaaqa weyn ee caalamiga ah, dhaqdhaqaaqa fudud ee dhaqdhaqaaqa, waxay ku habboon tahay inaanu xuquuqdan u hayno dadkeenna oo u socda cirqiga kale.
Waxaan u sheegi doonaa nuxur ahaan, "marwalba waxaad joogi doontaa guriga". Tani waxay kor u qaadaysaa xakameynta maskaxiyan waxay leedahay calaamad xoog leh. Waxay si fiican u dhaqangalin doontaa xubnaha qurba-joogta ah waxayna ka dhigi doonaan inay helaan asalkoodii.
Waxaa jira baahi loo qabo in la dhiso qaab dhismeed adag oo isku xira xiriirka lala leeyahay qurba-joogta, wasaarada ama ugu yaraan xogheyn dawladeed oo kuxiran Wasaaradda ama Wasaaradda Arrimaha Dibadda. Qalabkan xooggan, waxay lagama maarmaan u tahay in lagu daro aasaaska aasaasiga ah, wakiillada la soo doorto.
Maanta, walaalayaalkayaga oo dibadda ka yimid waxay dareensanyihiin in laga reebay maaraynta arrimaha dadweynaha, dhab ahaantii waxay ka mid yihiin meelaha ugu xun Afrika ee degaankaa; waa aragti cad oo ay ku adkeynayaan mid kasta oo ka mid ah kulannadayada. Mudo toban sano ah waxay weydiisteen laba jinsiyadood, nasiib daro, masuuliyiinta dawladda - madaxweynaha Jamhuuriyadda maskaxda ku hayaan - waxay weli yihiin dhegooleeyntooda cabashadooda.
Si kastaba ha ahaatee, qurba-joogta reer Cameroon ayaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah kuwa ugu xoogan Africa, laakiin ka sarreeya dhammaan tayada, deebaajiga karti-gelinta ee aan ka faa'iideysan maamulka dawladda.
Waa wax aan la aqbali Karin in ay sii wado in ay jiidato raaxada iyo dareemadan culus ee ka tanaasulid. Waxaan dadaal ku bixin doonnaa inaan ku qanacsanaano.
Waa wakhti ay dawladdu gooyso dhamaan qufuladahaan, albaabada u furo go'aammo xoog leh iyo ficilo sumcad leh. Doonista ka qaybqaadashada qurba-joogga waa caddayn. Waxay si buuxda u buuxiyaan shuruudaha qurba-joogta, ku xirnaanta dalxiiskeena quruxda badan iyo heerka ugu wanaagsan ee lagu aqoonsado waddankooda.
Serge Hope Matomba
Xoghayaha Koowaad ee PURS
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://lewouri.info/serge-espoir-matomba-la-diaspora-camerounaise-est-un-gisement-non-valorise-par-les-pouvoirs-publics/
Cameroon - Tareenka nolosha ee Gobolka: Halkan kharashyada safaaradaha ee wasaaradeena
Cameroon - Maqnaanshaha: Gobollada dhulka aan baahsaneyn ayaa ka faa'iideysan doona maalgelinta bil kasta ee miisaaniyadda 5 ee CFA Francs